၂၀၁၇၊ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို တွေ့ရစဉ် Photo: MUNIR UZ ZAMAN / AFP
မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက် နဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်တဲ့ ICJ မှာ မြန်မာနိုင်ငံ တရားစွဲခံနေရတဲ့အမှု ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်က ဒီနေ့ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်ကို တင်သွင်းဖို့ရှိပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်ကနေ ဒီနေ့ ၂၈ ရက်အထိ ဒုတိယအကြိမ် ကြားနာမှုမှာ ဒီအမှုဟာ ICJ အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာ တရားရုံးမှာ တရားစွဲခွင့် ရှိ၊ မရှိနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားစွဲထားတဲ့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံနဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်က အပြန်အလှန် လျှောက်လဲချက်တွေ ပေးနေကြတာပါ။ ဂမ်ဘီယာဘက်က တရားစွဲခွင့်ရှိကြောင်း လျှောက်လဲခဲ့သလို မြန်မာ ဘက်ကလည်း ဂမ်ဘီယာအနေနဲ့ တရားစွဲခွင့်မရှိဘူးလို့ ချေပ လျှောက်လဲထား ပါ တယ်။
Labels: 2022, ICJ, mm, NUG, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
The Hague မှာ ကြားနာရာမှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတုံးသတ် ဖြတ်မှု အမှုကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်တန်းတရားရုံး ကို မြန်မာစစ်အစိုးရက တောင်းဆို
22 ဖေဖော်ဝါရီ 2022
“စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက အခြေအနေတွေက အဆက်မပြတ် ဆိုးရွားနေပါတယ်။မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အကြီးအကဲ ဦးကိုကိုလှိုင် (ဝဲ) သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက် ICJ တွင် ကြားနာမှုတစ်ခု၌ မြန်မာနိုင်ငံအား လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့တရားရုံးရှေ့မှောက်တွင် ခုခံကာကွယ်ရန် ရောက်ရှိလာသည်။ / ICJ
ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကိစ္စနဲ့ ပတ် သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက တနင်္လာနေ့မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်လိုက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အမြင့်ဆုံးတရား ရုံးကို တရားဥပဒေကြောင်းအရ တောင်းဆိုချက်ကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ) တွင် 2019 ခုနှစ်တွင် ဆွဲထုတ်ခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူနည်းစုများအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဟု စွပ်စွဲကာ မြန်မာနိုင်ငံအား 2019 ခုနှစ်တွင် ဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။
Labels: 2022, ICJ, mm, NUG, ဂမ်ဘီယာ၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု, စစ်အစိုးရ, မြန်မာ, ရိုဟင်ဂျာ
By AFP 22 February 2022
The junta’s delegation defends Myanmar in the genocide case atapublic hearings at the ICJ on Feb. 21, 2022. / ICJ
Myanmar hit out Monday atagenocide case brought against it by Gambia for alleged persecution of Rohingya Muslims, urging the UN’s highest court to drop the claim on legal grounds.
Gambia dragged Myanmar before the International Court of Justice (ICJ) in 2019, accusing the predominantly Buddhist country of genocide against the Rohingya Muslim minority afterabloody 2017 military crackdown.
Labels: 2022, en, Gambia, Genocide, ICJ, Junta, Myanmar, NUG, regime, Rohingya
ICJ စီရင်ပိုင်ခွင့် မြန်မာကန့်ကွက်မှုအပေါ် ပညာရှင်တဦး အမြင်
22 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2022
ICJ နိုင်ငံတကာ တရားရုံးမှာ မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခုခံချေပချက်တွေဟာ အရင် ICJ တရား သူကြီးတွေ ပယ်ချခဲ့တဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကွာခြားမှုမရှိတဲ့အတွက် ဒီတကြိမ်မှာလည်း မြန်မာဘက်က အားသာ ဖို့ မရှိဘူးလို့ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေပညာရှင် Michael Becker ကသုံးသပ်ပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်က စွဲဆိုထားတဲ့ ဂျီနိုဆိုက် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့ စွဲ ချက်ကို တရားရုံးအနေနဲ့ လက်ခံဖို့ သင့်မသင့် မနေ့က ICJ တရားရုံးမှာ ကြားနာပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ သုံးသပ်ချက် အမြင်တွေကို မအင်ကြင်းနိုင်က စုစည်းတင်ပြမှာပါ။
Labels: 2022, Durblin က Trinity, ICJ, Michael Becker, mm, NUG, The Hague, နယ်သာလန်နိုင်ငံ, သတင်း
ICJ ရိုဟင်ဂျာအမှု နိုင်ငံကိုယ်စားပြုဖို့ စစ်ကောင် စီ မဖြေ ရှင်း နိုင်ဟု NUG ရှင်းလင်း
Zin Mar Aung on ICJ Presser
ICJ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာ ရိုဟင်ဂျာအမှုရင်ဆိုင်နေရာမှာ မြန်မာစစ်ကောင်စီက နိုင်ငံကိုယ်စားပြုပါဝင် နေမှုကို လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ NUG ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီကမြန် မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဒီပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ် ဇင်မာအောင်က ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2022, ICJ, mm, NUG, ဂမ်ဘီယာ, စစ်ကောင်စီ, ဒေါ်ဇင်မာအောင်, သတင်း
Labels: 2022, en, ICJ, Kyaw Moe Tun, Myanmar, News, NUG, Rohingya, Tun Khin
Why Sri Lanka And Cambodia Shouldn’t Support Myanmar Junta’s Defense In Rohingya Genocide Case At ICJ? – OpEd
Parvej Siddique Bhuiyan*
Following the military-led “clearance operation” that forced 750,000 Rohingya to flee neighboring Bangladesh, Gambia,aWest African nation, in November 2019, broughtacase to the International Court of Justice (ICJ), accusing Myanmar of violating the 1948 Genocide Convention.
In response to the court’s unanimously indicated legally binding provisional measures to protect the Rohingya from further atrocities, on January 2021, the then NLD government filedapreliminary objections to the jurisdiction of the Court and the admissibility of the Application. In this context, the ICJ recently announced that it will holdafresh round of hearings from Feb. 21–28 in the Great Hall of Justice in which the regime’s leaders will be potential defendants, sparking speculation that the Court is implicitly takingaposition in the ongoing civil war and legitimizing the unrecognized military regime. It is worth noting that the Junta-formed State Administrative Council (SAC) and the National Unity Government (NUG) have been struggling for recognition from the international community since the coup d’état in February 2021.
Labels: 2022, Article, Cambodia, en, Genocide, ICJ, Myanmar, NUG, OpEd, Rohingya, Sri Lanka
ICJ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံးမွာ ခုခံေခ်ပဖို႔ ျမန္မာကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ထြက္ခြာ
18 ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ 2022
FILE - The building of the International Court of Justice (ICJ) is seen in The Hague, Netherlands, Dec. 9, 2019
ICJ ႏိုင္ငံတကာတရာ႐ုံးမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တရားစြဲထားတဲ့ အမႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေရွ႕ေနအသစ္ငွားထားတယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီေျပာခြင့္ရက ဗြီအိုေအ ကို ေျပာပါတယ္။ ေရွ႕ေနအသစ္ ဘယ္သူဘယ္ဝါျဖစ္တယ္ဆိုတာ မေျပာေပမယ့္ အရင္ေရွ႕ေနအဖြဲ႕ က ႏုတ္ထြက္သြားသူအ စား ေရွ႕ေနသစ္နဲ႔ အရင္ေရွ႕ေနအဖြဲ႕ထဲက ၂ ေယာက္တို႔ အတူခုခံေခ်ပသြားမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္စတင္မယ့္ တရား႐ုံးၾကားနာပြဲအတြက္ စစ္ေကာင္စီရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး ဦး ေဆာင္ တဲ့အဖြဲ႕လည္း Netherlands ႏိုင္ငံ The Hague ၿမိဳ႕ကို ထြက္ခြာသြားၿပီလို႔ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္က လာ တဲ့ သတင္းအျပည့္အစုံကို မခင္ျဖဴေထြးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
Labels: 2022, Gambia, ICJ, mm, Netherlands, NLD, NUG, The Hague, William Schabas, ရိုဟင္ဂ်ာ, ဦးကိုကိုလႈိင္, ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း
Assuming responsibility for the ICJ case isameans for the National Unity Government to assert its position as Myanmar’s legitimate government.
Myanmar’s opposition National Unity Government (NUG) says that it has accepted the jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ) to hear claims that the country committed genocide against the Rohingya minority group, after formally withdrawing “all preliminary objections” in the case.
Labels: 2022, Article, en, Gambia, ICJ, Kyaw Moe Tun, Myanmar, NLD, NUG, Rohingya
Myanmar shadow government says junta should not take stand in genocide trial
The NUG says it wants to defend the country against charges because it represents the people.
The International Court of Justice hears proceedings inatrial on charges of genocide against Myanmar in The Hague, Netherlands, Dec. 10, 2019. Reuters
A decision by Myanmar’s shadow government to withdraw preliminary objections to charges of genocide against ethnic Rohingyas at the International Court of Justice (ICJ) was made to ensure the case is not fought byaparty that does not represent the will of the people, its foreign minister said Thursday.
The National Unity Government (NUG) said inaFeb. 1 statement that it would withdraw all preliminary objections in the ICJ case over Myanmar’s military operations against the Rohingya in 2016 and 2017,ascorched-earth campaign that forced 730,000 Rohingya to flee Rakhine state, mostly to neighboring Bangladesh.
The NUG asked that it and not the ruling military junta that took over Myanmar in the Feb. 1, 2021, coup represent the country before the court.
Labels: 2022, en, ICJ, Myanmar, Nay_San_Lwin, News, NUG, Rohingya, Zin Mar Aung